Iinqwelo-moya zase-Itopiya zikhupha ingxelo yeendaba kwiprojekthi yomoya yaseNigeria | Iindaba zeenqwelo moya
Ikhaya » Iindaba zeenqwelo moya » Iinqwelo-moya zase-Itopiya zikhupha ingxelo yeendaba ngeprojekthi yomoya waseNigeria
Iinqwelo-moya zase-Itopiya zikhupha ingxelo yeendaba ngeprojekthi yomoya waseNigeria
Agasti 15, 2018
Iinqwelo-moya zase-Ethiopia zikhuphe le ngxelo kumajelo eendaba namhlanje:
“Umphathi weQela weQela Airlines yaseTopiya Ulahlekisiwe ngamajelo eendaba kwaye akazange athi i-Ethiopian Airlines ingumntu oza kuqala ukuba liqabane kwiprojekthi ye-Nigeria Air. Uthe umTopiya, njengenqwelo moya yakwa-Pan-Afrika, ubonakalise umdla wokusebenzisana kule projekthi kwaye uphakathi kwabo bathathelwa ingqalelo ngurhulumente waseNigeria. ”
I-Ethiopia Airlines, eyayisakuba yi-Ethiopian Air Lines (i-EAL) kwaye ihlala ibizwa ngokuba yi-Ethiopia, ngumphathi weflegi yase-Ethiopia kwaye ungumnini ngurhulumente welizwe. I-EAL yasekwa ngomhla wama-21 kweyoMnga ngowe-1945 yaza yaqalisa ukusebenza ngomhla wesibhozo ku-Epreli 8, yanda yaya kwiinqwelomoya ngeenqwelomoya ngo-1946. Ifemu yaba yinkampani yezabelo ngo-1951 yaza yalitshintsha igama layo ukusuka kwi-Ethiopian Air Lines yaya e-Ethiopian Airlines. I-airline ibililungu le-International Air Transport Association ukusukela ngo-1965 kunye ne-African Airlines Association (AFRAA) ukusukela ngo-1959. I-Ethiopia lilungu le-Star Alliance, ejoyine ngoDisemba ka-1968.
Iziko lalo kunye nekomkhulu liseBole International Airport eAddis Ababa, apho sisebenza khona uthungelwano lweendawo ezili-125 zokukhwela abakhweli- ezingama-20 kubo zingamakhaya- kunye neendawo zokuhamba ezingama-44. I-airline inee-hubs zesekondari eTogo naseMalawi. I-Ethiopia ibhabhela kwiindawo ezininzi eAfrika kunayo nayiphi na enye into ephetheyo. Ngenye yeenkampani ezikhula ngokukhawuleza kwishishini kwaye yeyona inkulu kwilizwekazi laseAfrika.